तपाईं अब १०,००० भन्दा बढि डिजिटलाइड हलिउड फिल्म पोस्टरहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ क्रिएटिव अनलाइन
र यो यस्तो छ, दशकको ऐतिहासिक चलचित्र पोष्टरहरू अनलाइन हुन्छन् किनभने तिनीहरू डिजिटल छन् त्यसैले तपाईं तिनीहरूलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। 2MB भन्दा बढि तौल गर्न सक्ने फाइलहरू, जसले गुणवत्ता उत्कृष्ट छ भन्ने देखाउँदछ।
कुलमा तिनीहरू छन् १००० भन्दा बढी पोष्टरहरू कि फिल्म उद्योग को विभिन्न दशकहरु संकलन। हामी s० को दशकदेखि धेरै अरूलाई पोस्टरको बारेमा कुरा गर्न सक्दछौं जुन s० को दशकमा बिलबोर्डमा थिए। फिल्म ब्राउजरहरूको लागि एक उत्तम अवसर जुन डाउनलोड गर्न फाइलमा ईतिहासको यस अंशलाई राख्न चाहान्छ; बाँकी सबै एक मा निर्भर गर्दछ।
ती सबै पोस्टरहरू हुन सक्छन् तीन फरक आकारमा डाउनलोड गरियो «उपभोक्ता of को स्वाद गर्न। हामी वेस्ट साइड स्टोरी जस्तो साधारण डिजाइनहरू फेला पार्न सक्दछौं, फिल्म ईतिहासको सर्वश्रेष्ठ म्यूजिकलहरू मध्ये एक वा अफ्रिका टेक्सास स्टाइल जस्ता अन्य जटिल पोस्टरहरू!
चलचित्र पोष्टर्सको यस संग्रहको अंश हो एक महत्वाकांक्षी डिजिटलकरण परियोजना। प्रत्येक १०,००० पोष्टर्स शुरुमा फोटोग्राफी स्टुडियोमा हस्तान्तरण गरिन्छ, ताकि डाटाबेस फाइल सिर्जना गर्नका लागि मेटाडेटा पोस्टरबाट संकलन गरिन्छ।
एक पटक पोष्टर सही रूपमा क्यामेराको साथ पigned्क्तिबद्ध गरिएको छ, क्यामेराको उचाई यो पोस्टरको साइजमा फिट हुन समायोजित हुनुपर्छ, ताकि हाई डेफिनिशन फोटो लिन सकून्। फोटोग्राफरले छवि पूर्वावलोकन गर्नु पर्दछ कि यो सुरक्षित गर्न यो मूलमा विश्वासयोग्य छ। अन्त्यमा पोस्टर अर्कोमा सुरू गर्न यसको फोल्डरमा फिर्ता लिइएको छ।
अहिलेसम्म ,4.000,००० भन्दा बढि पोष्टरहरू अनलाइन देखिएका छन् लरेन वाकरको कामको १ बर्ष पछि र फोटोग्राफी स्टूडियो मा उनको टीम।
ई बनाउनेयी पोस्टरहरू हेर्न र अनलाइन डाउनलोड गर्न सकिन्छ अधिक समय पहुँचको साथ तिनीहरूलाई संरक्षण गर्न अनुमति दिन्छ। चलचित्र पोस्टर संग्रहको बाँकी २०१ 2018 को अन्त र २०१ early को शुरुमा डिजिटलाइज्ड हुने अपेक्षा गरिएको छ।
लि Link्क संग्रह यहाँ डाउनलोड गर्न। हामी तपाईंलाई अर्कोसँग छोड्दछौं उही न्यू योर्क सार्वजनिक पुस्तकालयको अनलाइन भण्डार.
लेखको पूर्ण मार्ग: अनलाइन रचनात्मक » सामान्य » प्रेरणा » तपाइँलाई अनलाइन डाउनलोड गर्न १०,००० भन्दा बढी डिजिटल ऐतिहासिक फिल्म पोस्टरहरू
इवान सलाडो भन्यो
रुबान सलाडो ऐन्हो साला
Iván सलादोलाई जवाफ दिनुहोस्